Indlela ukusekela nokubuyisela iPhone yakho, iPad, iPod Touch besebenzisa ICLOUD
Ungase ivame ukusebenzisa iTunes ukwenza isipele idatha iningi on iPhone lethu, iPad and iPod Touch, lokhu kungenziwa futhi ngokusebenzisa ICLOUD. Lapha sizobonisa indlela ukusekela bese ubuyisele okuqukethwe kwi-iPhone yakho, iPad, and iPod Touch besebenzisa ICLOUD.
ICLOUD iyinhlangano isitoreji ifu, okuvumela abasebenzisi ukugcina idatha njengomculo iOS izicelo futhi usebenza njenge isikhungo idatha ukuvumelanisa for imeyili, othintana, amakhalenda, amabhukumaka, Amanothi, izikhumbuzo (uku-do uhlu), iWork Imibhalo, izithombe kanye nezinye idatha. Ungangena okuqukethwe kusuka noma yini idivayisi wena wedwa.
Iphinde avumela ukuthi abasebenzisi bamanzi kwentambo ezivumelana iOS Amadivayisi zabo ukuba ICLOUD esikhundleni ngesandla ngokwenza kanjalo besebenzisa iTunes.
Indlela ukusekela besebenzisa ICLOUD
Uma unike amandla ICLOUD Backup kumadivayisi akho iOS usebenzisa i iOS 5 noma kamuva, ICLOUD uyobe uyahlehla idatha esibaluleke kunazo ngokuzenzakalelayo. You can find the switch on your iPhone, iPad, or iPod touch in Izilungiselelo > ICLOUD > isipele & Storage, it runs on a daily basis as long as your device is over Wi-Fi, sivaliwe, futhi ixhunywe umthombo amandla.
You can also back up manually whenever your device is connected to the Internet over Wi-Fi by choosing Back Up Now from Izilungiselelo > ICLOUD > Storage & isipele.
Okokuqala, you can learn more about What ICLOUD uyahlehla.
Follow the initial steps in the iOS Setup Assistant (select your language, nokunye).
Khetha isipele ukudale phambilini.
Uma usuvele usethe up idivayisi yakho, kufanele usule yonke sokuqukethwe wamanje kuqala. Tap Izilungiselelo > General > Hlela kabusha > Sula Konke kanye Izilungiselelo. Yenza lokhu kuphela uma usunayo ibhekhaphu, ngoba lesi sinyathelo kuzosusa yonke nokuqukethwe wamanje kusuka kudivayisi yakho.
Inothi: Kungcono ukuba ukuxhuma idivayisi yakho ku-umthombo amandla kuze kube buyisela kuqedile. Futhi qiniseka kule khompyutha ine okufushane yakamuva ye iTunes.
Funda indlela ukwenza isipele idivayisi yakho nge-iTunes.
Posted on September 27, 2013 November 24, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi isipele iPad ukuze ICLOUD, isipele iPhone ukuze ICLOUD, isipele iPod touch ukuze ICLOUD, buyisela iPad kusuka ICLOUD, buyisela iPhone ngekusebentisa ICLOUD, buyisela touch iPod kusuka ICLOUD
Langaphambilini post Previous: What ICLOUD uyahlehla
Next post Next: Indlela ukwenza isipele idatha iPhone ngaphambi ngcono ku-iOS 7